होमपेज / कला / बलीवुड / धोकेबाजका नाउँमा अन्तिम हरफहरू
धोकेबाजका नाउँमा अन्तिम हरफहरू	14 Jun 2013 | 10:39am शुक्रबार ३१ जेष्ठ, २०७०
काठमाडौं - यो कुरा तिमीलाई कसरी भनूँ? अन्योलमा छु। तर, अब म यो कुरा तिमीलाई भन्न सक्छु किनभने गुमाउनका लागि मसँग अब केही पनि बाँकी छैन। मैले सर्वस्व गुमाइसकेँ। तिमीले यो चिठी पढ्दा मैले संसार छोडिसकेकी हुनेछु, अथवा छोड्ने क्रममा हुनेछु। तिम्रो जिन्दगी भन्नु नै पार्टी र केटीहरू थिए। मेरो जिन्दगी चाहिँ तिमी र काम थिए। यस दुनियाँमा रहेँ भने म तिमीप्रति आशक्त हुनेछु र तिम्रो यादले सताइनेछु। त्यसैले म आफ्नो १० वर्षको करिअर र सपनाहरूबाट बिदा लिँदै छु। भित्र–भित्र भत्किसकेकी छु म। तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ तर तिमीले मलाई त्यो तहसम्म प्रभावित गर्यौ् कि मैले आफूलाई बिर्सेर तिमीलाई माया गरेँ। त्यसको बदला हरेक दिन तिमीले मलाई यातना दियौ। अचेल म कतै उज्यालो देख्दिनँ। हरेक बिहान ब्युँझन नचाहेर ब्युँझन्छु म।
यो संसारमा बाँच्नका लागि अब मसँग केही पनि छैन। मैले जसरी तिमीले पनि माया गरिदिएको भए...। मैले हाम्रो भविष्यको सपना देखेको थिएँ। हाम्रो सफलताको सपना देखेेको थिएँ। टुटेका सपना र खोक्रा प्रतिज्ञाका साथ म यो संसार छोड्दै छु। बस्, अब कहिल्यै नब्युँझनेगरी निदाउन चाहन्छु म। तिमीसँग हुँदा पनि म आफूलाई नितान्त एक्लो ठान्थेँ। तिमीले मलाई एक्लो र कमजोर बनाइदियौ। म योभन्दा धेरै थोक हुँ। « श्रीलंकामा ५० वर्ष पुरानो मुम्बई!
भारतीय अभिनेता राहुल काठमाडौंमा »
जियाको श्रद्धाञ्जली सभामा बलिउड स्टार जिया आत्महत्या : प्रेम टुट्यो, जीवन छुट्यो बलिउड हिरोइन जिया खानले आत्महत्या गरिन् प्रतिक्रिया
दिल धड्किन्छ आफ्नै ढंगमा17-06-2015 दीपेन्द्र लामाबलिउडरुपी समुद्रमा हरेक वर्ष दर्जनौं जहाज यात्रामा निस्किन्छन्। तर, सबैले यात्रा पूरा गर्दैनन्। कतिले बाटो बिराउँछन् त कति समुद्रमै विलीन...	एक अर्गानिक खुराक 'सुन्तली'16-02-2015 दीपेन्द्र लामाभारतबाट नेपालको पहाडतिर क्रिकेट खेलमात्र भित्रिएको छैन। बेलाबखत भयानक गुण्डाहरुको पनि घुसपैठ भइरहन्छ। फिल्म 'सुन्तली'मा यस्तै हुन्छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट...	सिम्पल र स्वीट 'जेरी'25-11-2014 दीपेन्द्र लामायात्राले मान्छेलाई धेरै थोक सिकाउँछ। जेरीले पनि सिक्छ। मुस्ताङसम्म तन्किएको घुमफिरमा उसले थुप्रै हन्डर खान्छ र आफूलाई चिन्ने अवसर पाउँछ।मुस्ताङलाई...	दर्किन्छ झरी, रुझ्दैनन् दर्शक!29-04-2014 दीपेन्द्र लामानेपाली निर्माताहरु फिल्म बनाउन ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्चेको गफ दिन्छन्। फिल्म हेर्दा सही ठाउँमा लगानी गरिएको पाइँदैन। फिल्मको मेरुदण्ड मानिने...	खच्चड होइन, लोकल घोडा!28-04-2014 दीपेन्द्र लामा'होइन ओ दाइ, यो घोडा हो कि खच्चड?' फिल्मभित्र निश्चल बस्नेतले सोधेको यो प्रश्न वास्तवमा त्यस्ता नेपाली फिल्मकर्मीप्रति लक्षित देखिन्छ,...	छुटाउनु भयो कि	उद्योगी केडियाको अपहरणवीरगन्ज- वीरगन्जको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना केडिया समूहका उद्योगी सुरेश केडिया बिहीबार साँझ अपहरणमा परेका छन्। अपहरणकारीको...	मनिषाका प्रेमी भन्छन्ः बियर खाएको थिएँ, राती ११ बजे पासो लगाएको देखेँकाठमाडौं–मनिषा घर्ती मगरको शव पोष्टमार्टमका लागि नवलपरासीबाट काठमाडौं तर्फ ल्याइदैछ। टिचिङ अस्पतालमा शवको पोष्टमार्टम हुने नवलपरासीका...	गुँड निर्माणमा व्यस्त बया तोप चरा (फाेटाेफिचर)काठमाडौं- नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका चरामध्ये रंगीन चरा 'बया तोप चरा, (वेवर्सबर्ड) को परिचय भिन्न छ।...	कोकिन तस्करीमा दाउद सञ्जालकाठमाडौं- जाली नोट, सेतो र खैरो हेरोइनको कारोबारपछि पहिलोपटक पाकिस्तानी माफियाको संलग्नता कोकिन कारोबारमासमेत देखिएको छ।...	चुरेमा फेरि विनाशलीलाकाठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) व्यवस्था खारेज गरेलगत्तै चुरे क्षेत्रमा फेरि विनाशलीला सुरु...	Nagarik News